Amakhithi we-Arduino namabhodi ukuze aqale kulo mhlaba | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ku-HWLibre kunamaphrojekthi amaningi enziwe ngokususelwa kokukhethwa kukho okuhlukile kwe-Arduino okukhona emakethe esikhulume ngakho. Iqiniso ukuthi amathuba amaningi futhi, njengoba kwenzeka kaningi, ngayinye inezici zayo futhi imvamisa inesithakazelo ukwedlula konke ukwenza iphrojekthi ethile ngezici zayo.
Ngenxa yalokhu namuhla sifuna ukuma isikhashana futhi, esikhundleni sokuqhubeka sikhulume ngamaphrojekthi ahlukahlukene, sithathe umoya omncane futhi sihlangane ukuxoxa ngesihloko esilula nokuthi, impela, ngenkathi siqala kulo mhlaba, bekuzosizakala kahle.siza njengoba injalo ukuqala kuphi, okuthile okuzoba wusizo olukhulu kubo bonke labo bantu abaqala kulomhlaba wokuzijabulisa nokudlala.
Uma usufinyelele kuleli qophelo, ngokuqinisekile uzokuthanda konke okunganikezwa ulwazi oluthile okuzokuvumela, ngokwesibonelo, ukuzakhela amarobhothi wakho, wenze izinto ezihlukile zansuku zonke ozenza ekhaya lakho ... nakho konke lokhu kubonga ukusetshenziswa kwepulatifomu yamahhala engabizi kakhulu. Sizoqala?
1 Kunezinhlobo ezahlukahlukene zebhodi le-Arduino, engikhetha yiphi?
1.1 Amabhodi asemthethweni e-Arduino
1.2 Amabhodi ahambisanayo e-Arduino
2 Amakhithi okuqalisa anconyiwe
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zebhodi le-Arduino, engikhetha yiphi?
Lapho usucacile ngalokho ofuna ukukwenza, mhlawumbe isinyathelo sokuqala ukucacisa ukuthi yiliphi ibhodi le-Arduino okufanele ulikhethe. Kukholwe noma ungakukholwa, iqiniso ukuthi lesi sinqumo sizoba yisisekelo semiphumela yokugcina oyitholile kusukela lapho ukwakhiwa kwayo kungakhawulela imibono yakho kancane futhi ngaphezu kwazo zonke izixazululo ongazisebenzisa ukwenza iphrojekthi ivele.
Iphuzu elibaluleke kakhulu akusilo kuphela usayizi nezinto zokwenziwa ongazixhuma kulo, kepha ibhodi uqobo lwayo njengoba singeke silinganisele ekuthengeni i-Arduino kanjalo, ngisho ibhodi elisemthethweni, kepha futhi nalezi zinhlobo ezisemthethweni (Lapho ukucushwa okuningana) kufanele sengeze konke esinikezwa yilawo wonke amabhodi ahambisanayo, okuthile okwandisa kakhulu izinketho zethu kusukela, uma ekuqaleni Sidinga usayizi othize kanye nesixhumi sohlobo oluthile, mhlawumbe ibhodi elisemthethweni alinikezi lona kepha liyahambisana.
Amabhodi asemthethweni e-Arduino
I-Arduino, eminyakeni edlule (ibilokhu imakethe kusukela ngo-2006) isukile ekunikezelweni ngefomethi eyodwa iye ekubeni itholakala namuhla ngezinguqulo ezingezansi kwezingu-12 lapho, lapho isikhathi sifika, singangeza lezo esezinqamukile. Kuleli qophelo, uma ungakwazi ukuthola ibhodi elifanela kahle izidingo zakho, mhlawumbe ungathola enye yezengezo, izandiso, kanye namakhithi athengiswa ngokusemthethweni yi-Arduino ngewebhusayithi yayo noma kunoma yimuphi omunye wabasabalalisi bawo asemthethweni.
Kuleli qophelo, njengoba ubona esithombeni esedlule, ngokuyisisekelo umehluko phakathi kwezinketho u-Arduino asinikeza zona kusekelwe ikakhulu ku usayizi, ukuxhumeka kanye nobuningi bokufakwa kanye nemiphumela ye-analog kanye nedijithali ipuleti ekhethiwe elinayo. Iphuzu okufanele silinake yimemori yangaphakathi enikezwa yibhodi uqobo, ukuze lapho kuthanda ukuba yinkimbinkimbi (ezingeni lekhodi) iphrojekthi esizoyikhweza, izodinga inkumbulo enkulu.
Phakathi kwezinketho ezahlukahlukene esinazo, sizithola sisesigabeni sokuqala isinyathelo se- Ayikho imikhiqizo etholakele., ngaphandle kokungabaza imodeli eyisisekelo kunazo zonke bese kuthi lowo onenani elikhulu kakhulu lokufakwayo nemiphumela. Ngokubona kwami, kuhle uma uqala.
Isinyathelo esisodwa ngaphezulu sithola ifayela le- I-Arduino Zero, ekahle uma udinga amandla amaningi ngoba bane-CPU enamandla kakhulu nememori enkulu kakhulu i-RAM ne-ROM. Uma kwenzeka udinga okokufaka kwedijithali okuningi ozoxhuma ngayo amamojula ahlukile, inketho ekahle kungaba ukuthola eyodwa I-Arduino Mega.
Kuleli qophelo, imininingwane kufanele ibhekwe, ngakolunye uhlangothi, iqiniso lokuthi ngeshwa kunamabhodi amaningi we-Arduino amanga emakethe, kwesinye isikhathi okungaba nzima kakhulu ukuzibona ukuthi ziyiqiniso noma zingamanga, ikakhulukazi uma sifuna i- Arduino Uno. Okwesibili, ngikutshele ukuthi amapuleti I-Arduino yenzelwe imakethe yase-United States kuphela, kanti ngaphandle kwalokhu, umkhiqizo uthengiswa njengeQiniso umehluko kuphela phakathi kwemikhiqizo yomibili yizinkinga ezisemthethweni nezokumaketha.
Amabhodi ahambisanayo e-Arduino
Ngaleso sikhathi, ikakhulukazi uma unolwazi olwanele lwe-elekthronikhi, ungacabanga nomqondo wokwakha ibhodi lakho elihambisana nawo wonke ama-kits nezinsiza ze-Arduino. Lona ngumqondo wokuthi abakhiqizi abaningi balandele labo abasebenzise ngokoqobo ukudonsa nodumo lwale nkundla ukunikeza izixazululo, ezinye zijabulisa kakhulu ihambisana ngokuphelele ne-a intengo ephansi.
Phakathi kwamapuleti ahambisanayo esingakuthola, kubalulekile ukuhlukanisa ukuthi, ngombono wami, okuhle kakhulu yikhona okukuvumelayo sebenzisa imvelo yentuthuko I-Arduino IDE Ngenkathi, ezingeni lezingxenyekazi zekhompyutha, zikuvumela ukuthi usebenzise i-hardware efanayo, ikakhulukazi ngokwezinto ezithile, ngoba, ezingxenyeni, uzothola nabakhiqizi abaningi abahlukahlukene abaneziphakamiso ezihluke kakhulu. Phakathi kwezibonelo ezahlukahlukene esingazithola zigqamisa okwaziwa kakhulu, ikakhulukazi ngumphakathi okhona nokuthi, lapho isikhathi sifika, singaba wusizo olukhulu emibuzweni ephathelene nokusekelwa kwezobuchwepheshe:
I-Freeduino: Mhlawumbe owaziwa kakhulu, lo mndeni ohambelana ne-Arduino unamamodeli amaningana wamabhodi afana nezinguqulo zokuqala. Imodeli enconyelwe kakhulu yi-Epic, ehambelana ne-Arduino Mega futhi ebiza u- $ 44.
I-Zigduino: Enye yamamodeli ahambisanayo afaka ukusebenza okwengeziwe cishe ngentengo efanayo neyasekuqaleni. Kulokhu, kukhona ukuxhumana kweZigbee okwakhelwe ngaphakathi kwe- $ 70.
UFunduino: Enye yamamodeli ahambisana ne- Arduino Uno okungabiza kakhulu ongakuthola. Kubiza ngaphansi kwama-euro angama-7 futhi kunamamodeli ahambisana nezinye izinhlobo.
UFreaduino: Njengoba ukwazi ukubona, ingxenye yokukhohlisa kwamabhodi ahambisanayo ukufaka igama mhlawumbe ukusizakala ngokudideka. Le modeli ilingana nebhodi le-Uno kepha ibiza ama-euro angama-18 kuphela.
I-SaintSmart: Iyahambisana ne-Arduino Mega 2560, kubiza ngaphansi kwama-euro angama-20.
I-XcSource: Enye yamamodeli ayo athakazelisa kakhulu yiwo ahambisana ne- Arduino Uno, futhi iphuma ngama-euro ayi-12.
I-BQ Zum Core: Yize leli bhodi lithakazelisa kakhulu, iqiniso ukuthi kufanele uqaphele ukuthi alihambisani ngokuphelele ne-Arduino. Umqondo ngukuthi ngemuva kwalolu khetho umphakathi wonke wenziwe lapho ungathola khona amamojula, okokufundisa, ukwesekwa kanye nemvelo yohlelo ehambisana namabhodi e-Arduino.
Amakhithi okuqalisa anconyiwe
Lapho sesithathe isinqumo sokuthi yiliphi ibhodi elithandeka kakhulu kuphrojekthi yethu, noma ngabe lisemthethweni noma liyahambisana, sekuyisikhathi sokuthenga ikhithi. Ngokuyisisekelo lapho sikhetha ibhodi lokho esinakho yilokhu, ibhodi, kepha sidinga ezinye izinto ezifana nentambo ye-USB esizofaka kuyo isoftware yethu kwimemori yayo noma siphe amandla ayo amandla amamojula anzima kakhulu anikeza incazelo eyengeziwe iphrojekthi yonke.
Ukuze singabi nenkinga enkulu, ngoba izidingo zephrojekthi zizosenza sibone kahle ukuthi yini esingayidinga noma esingayidinga, ngizoqhubeka nokuphawula ngamakhithi athile okuqala ongawathola kunoma yisiphi isitolo esisemthethweni noma umhambisi womkhiqizo , zombili ezivela ku-Arduino uqobo, kanye nanoma yimaphi amabhodi ahambisanayo. Ngalo mqondo, ngokuya ngezingxenye ezifakwe kukhithi, kuzoba kubiza kakhulu noma kungabizi kakhulu, izinketho ziningi kakhulu futhi ziyahlukahluka:
I-Arduino Official Kit: Ikhithi yokuqalisa, ngeSpanishi nangamaphrojekthi wezandla nahlukene alungele ukuhlangana.
Kit I-Arduino Uhlobo lweSparkfun 3.2: Ikhithi esemthethweni yabaqalayo kanye nezinga eliphakathi nakho konke okudingayo kumaphrojekthi wokuqala wohlelo nokusebenzisana ne-hardware. Ifaka ibhukwana eliphelele lesiNgisi kepha inguqulo yaseSpain ingalandwa ku-inthanethi.
I-Arduino Starter Kit: Ikhithi yokuqalisa ephelele eneziqinisekiso zekhwalithi. Yikhithi ethengisayo www.arduino.org (inkampani ephethe umkhiqizo we-Arduino ngaphandle kwe-United States). Leli kit lifaka ibhukwana ngeSpanishi, ipuleti Arduino UNO nakumawebhusayithi amaningi aseSpain athengiswa njengasekuqaleni.
Ikhithi ehambisana ne- Arduino Uno R3: iqukethe izingxenye ezingama-40 esimweni esisebenzayo. Ingenye yezindlela ezingabizi kakhulu.
Ayikho imikhiqizo etholakele.: Uma ufuna ukuyibhodi ehambisanayo yeFunduino, le kit iyindlela engcono kunebhodi elihlukile.
I-Kuman Super Starter Kit: Ilungele abaqalayo. Enye yamakhithi e-Arduino angahlelekile aziwa kakhulu. Ifaka izinto ezingama-44, okokufundisa kanye nekhodi yomthombo yamaphrojekthi.
Ayikho imikhiqizo etholakele.: Ikhithi evuselelwe ngo-2016 futhi enengxenye engaphezu kweyedlule (izingxenye ezingama-49). Kufaka amaphrojekthi angaphezu kwama-20 kulesi sethi ephelele nakho konke okudingayo ukuze uzibandakanye ngokuphelele ne-Arduino.
I-SainSmart Basic Starter Kit: Ikhithi Arduino UNO ngentengo elungisiwe nangakho konke okudingayo ukuqala ukuzama nokwenza amaphrojekthi angafika kwangu-17 ngokulandela izifundo zakho. Ayifaki imanuwali enezifundo ezihamba ngezinyathelo kodwa konke kuyatholakala ukulanda futhi banesiteshi ku-YouTube.
I-Zum Kit: Ngesethulo esiqaphele kakhulu nezakhi ezahlukahlukene nezikhwalithi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Ukuqala nge-Arduino: imaphi amabhodi namakhithi angaba mnandi kakhulu ukuqala
Umehluko wamapuleti wangempela namakhophi, lapho sikhuluma ngepuleti nesoftware yomthombo ovulekile iyakhwifa kancane…. ikakhulukazi lapho amalungu amaningana eqembu lokuqala asungula i-arduino ngokusobala aya ehhovisi lobunikazi ukuze abhalise uphawu lwentengiso lwe-arduino.
I-hybrid phakathi kwe-Arduino yalezi ne-Lion 2 isebenze kahle kakhulu kimi.I-3D prints iyamangalisa kulomshini bese ivumelaniswa ne-Arduino izinto eziningi zingenziwa